imoto ukutya Magic, nto leyo ishishini eliphezulu-zobugcisa iingcali uyilo, uphuhliso, imveliso kunye kwiintengiso nezithuthi ezikhulu zezorhwebo.
Le nkampani ngokubhekisele R & D kunye ezintsha njengoko ukhuphiswano yayo engundoqo, kwaye iye yaseka iqela elihle R & D kunye noyilo, ugxininise ubukrelekrele, isilawuli esizisebenzelayo, zobungcali, kunye nokuphuculwa.
Sinyanzelisa eku sunguleni elizimeleyo. Le nkampani iye wafumana amalungelo abenzi iteknoloji-kwinqanaba likazwelonke ngaphezulu kwe-100, ngokubonelela ezenziwe izisombululo ivenkile mobile iimfuno zabathengi, nokunceda abathengi bakhe bulumko ishishini elitsha.
Le nkampani leyo elenza umsebenzi yeevenkile ezenziwe mobile. Iimveliso zifikelela inqwaba kweentlobo ezifana nezigadla ngokukhawuleza-ukutya, iinqwelo ezahlukeneyo cream ice, iintlobo ezahlukeneyo iinqwelo ukubhaka, nezithuthi ezikhulu zezorhwebo eluntwini, iimoto istudiyo, kunye neemoto beauty isikhonkwane.
Ishishini lugubungela okulula, iziselo isitalato, iindlela zokufikelela, izixhobo zombane, ukufanitshala ekhaya, ishishini ingubo, ishishini makeup ubuhle, ishishini yokuhlala, ukhenketho kunye namanye amashishini. iimveliso zethu zithunyelwe eUnited States, South Korea, i-European Union, i-Middle East kunye namanye amazwe Asia nabaseYurophu kunye nemimandla.